2008 June | MoeMaKa Burmese News & Media
>japanese cartoons on Daw Suu
> စာအုပ်ကို http://comic.irrawaddymedia.com/ တွင် ၃ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒေါ်စုအကြောင်း သရုပ်ဖော်ထားသည့် ဂျပန်ကာတွန်းစာအုပ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထွက်ပြီဘီဘီစီ(မြန်မာဌာန)ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဂျပန်နိုင်ငံက ကာတွန်းဆရာ Akazu Mizuha က မြန်မာနိုင်ငံက...
>soe myat nanda and phyo gyi
> စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့် ဖြိုးကြီး အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ကြာခဲ့ မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂ ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၀၈ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့် အဆိုတော်ဖြိုးကြီးတို့ ကွာရှင်း ပြတ်စဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေးမုံသတင်းစာ ကြော်ငြာတခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။...
>88 – 20 years after – The Writers
> – ၈၈ အနှစ် ၂၀ –၈၈ နှင့် စာရေးဆရာများမောင်စွမ်းရည် (မှတ်ချက် – မောင်စွမ်းရည်က အဲဒီ ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ မြင်ကွင်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါတယ်။ ၈၈...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစများ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိဇွန်လ စတုတ္ထပတ် ၂၀၀၈ဇွန် ၂၇ ၂၀၀၈ စစ်တပ် ၀န်ကြီးချုပ်က သီတဂူသဲကုန်း ဆရာတော် လှူဒါန်းထားတဲ့ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။ADRA Myanmar...
>အောင်ဝေး – မီခဵီကန်ြေိံဦး
> မစ်ရှီဂန်နွေဦး အောင်ဝေးဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဒီနွေဦးမှာဂျူးလိယက်ဖူးချစ်ကို သတိရသလိုယာမာဂူချီကိုလည်း သတိရတယ်။ ဒီနွေဦးမှာပါဘလိုနီရူဒါကိုသတိရသလိုဒဂုန်တာရာကိုလည်း သတိရတယ်။ ဒီနွေဦးမှာမဲဆောက် ဒေါင်းရင်ပြင်ကို သတိရသလိုတာမွေ ၁၆၄ လမ်းကိုလည်း သတိရတယ်။ ဒီနွေဦးမှာရွှေလီက မြန်မာတန်းကို သတိရသလိုရန်ကုန်က...
> ဘေးဧရိယာက မြန်မာအစုအဖွဲ့များ နာဂစ်လေဘေး ကူညီမှု ဒေါ်လာ ၁ သိန်းကျော်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ လူထုစုဝေးရာများတွင် မြန်မာအမျိုးသားအစုအဖွဲ့များက နာဂစ်မုန်တိုင်းလေဘေး ကူညီမှု ရန်ပုံငွေပွဲများ၊...
> အင်းစိန်ထောင်ရောက်မစုစုနွေး နံရံခေါင်းနှင့်ဆောင့်ဘီဘီစီ(မြန်မာပိုင်း)ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ အင်းစိန်ထောင်မှာ အချုပ်ခံထားရတဲ့ စုစုနွေး မနေ့တုန်းက အုတ်နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဆောင့်လို့ သတိမေ့သွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အုတ်နံရံကို သတိမေ့တဲ့အထိ ခေါင်းနဲ့ဆောင့်ပြီး တောင်းဆိုရလောက်အောင် သူ့မှာ ဘာပြဿနာတွေများ...
> စစ်အစိုးရ၏ မီဒီယာနှိပ်ကွပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို အာဏာပိုင်တို့က ယခင်ကထက် ပိုမို စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် မိုးမခအထောက်တော်တဦးက “ဒီမှာ တင်းကြပ်နေတယ်။...
>More photos from the relief works by Sayadaw Ashin Dhammapiya’s delegation in the delta
> သင်္ကန်းကျွန်း ငါးကျမ်းပြန်ကျောင်း နှင့် ဖရီးမောင့် မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရ ရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ဓမ္မပီယ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၂၅၊ ၂၀၀၈
>ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် – ၆၃
> ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် – ၆၃ကဗဵာစုစည်းမြ – မင်းသုဝဏ်၊ တင်မိုး၊ မောင်စမြ်းရည်ဇနြ် ၂၅၊ ၂၀၀၈ ထောင်ူပင်ပက ထောင်သားမဵား(ဒေၞစု အသက် ၆၀ူပည့် မြေးနေႚ အမတ်ြတရ ရစ်ြလုံးဘြဲႚ ကဗဵာ)...
> မင်းအလှ ခဏ ငှားပါရစေအရှင်ဉာဏိကဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၈ နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်း Good Morning! ဒါမှမဟုတ် Morning! ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို မျက်နှာချင်းဆိုင် လျှောက်လာသူ၊ ပြေးလာသူတွေဆီကဖြစ်စေ၊ နောက်ကနေ ကိုယ့်ကို...
>၈၈ – အိံစြ် ၂၀
> ၈ ၈ – အနှစ် ၂၀(အခန်းဆက်များ)မောင်ရစ်ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ သြဂုတ်လက ၈၈ အရေးတော်ပုံ ၁၉ နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းမှာ ပြည်တွင်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ထောင်ထဲက...
>Nargis Hit Delta Short on Help & AID still after nearly2months
> ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အကူအညီများနဲ့ ဝေးဆဲမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၀၈ မေလ ၃ ရက် နာဂစ်မုန်တိုင်းရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသေကျေခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ယခု ၂လ...
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ ဇနြ် ၂၂၊ ၂၀၀၈ဒိုႚခေတ် – ဇာဂနာသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာဧရာဝတီတိုင်းအရေူးမန်မာူပည်အရေူးဖစ်တော့မည် – ခေတ်ူပိင်ြသိန်းထီပေၝက်သမ္တွ ကမ္တာတလြာုးသစေုတးလဵနဲႚ ဆစ်ဒနီကူမန်မာူပည်လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးဂရုဏာတေးနဲႚကဗဵာ –...
> ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး စောဝေ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈ အာရင်ဘက်က ပြောတယ်နာ နာခံစားတတ်မှ ခံစားမှရူးရူးမူးမူးကို ဖြစ်နေမှကြီးမြတ်တဲ့အနုပညာလို့မှူးမှုံမှိုင်းဝေစေတဲ့ ဓာတ်ပုံမော်ဒယ်မလေးရေကြီးတောင့်ကြီးမားကျမှ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ တဲ့သန်းပေါင်းများစွာသော ချစ်တတ်သူများရွှေအတိချထားသောလက်များဖြင့် လက်ခုပ်တီး၍ရယ်ပါ။ (မှတ်ချက် – အချစ်ဂျာနယ်တွင်...
> ဆက်ဖတ်ချင်သော ဘလော့ဂ်များမိုးမခ စာဖတ်သူ (ဟောလိဝုဒ်)၊ စာဖတ်သူတွေ ရေးတဲ့စာ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈ စိုးဇေယျထွန်း http://soezeya.blogspot.com/ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒွေး ကွယ်လွန်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ သူ့ ထံက ဦးဦးဖျားဖျား...
>After Nargis, reaction from refugees at small villages
> Charity Drive at small villages in Dedaye, Delta, Burma, after NarigsMoeMaKa Video, June 21, 2008 – Reaction from...
> နယူးယောက်က ပူဇော်ခံ သက်ကြီးဝါကြီး ၉ ဦးရဲ့ ဒေါ်စု ၆၃ မွေးနေ့ အမှတ်တရ စကားမှတ်တမ်း ထွက်ရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈ သာသနမောဠိ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်...
>Myochit Myanmar- Helpless hands -MTV
> Myochit Myanmar- Helpless hands -MTVJune 21, 2008